Skin Editor for Minecraft 2.2.9 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.2.9 လြန္ခဲ့ေသာ2ရက္က
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား Skin Editor for Minecraft
Skin Editor for Minecraft ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Minecraft များအတွက်အသားအရေ Editor ကိုသင်တည်းဖြတ်အပေါင်းတို့နှင့်ပလက်ဖောင်းမှ Minecraft အရေခွံလျှောက်ထားရန်အဘို့ကြီးစွာသောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
သငျသညျ (သင်နေဆဲတစ်ခု option ကိုအဖြစ်အသုံးပြုရန်နိုငျသျောလညျး) အရေပြား Editor ကိုသုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ပါဘူး BlockLauncher
ဤရွေ့ကား Minecraft features တွေအဘို့အရေပြားအယ်ဒီတာနေသောခေါင်းစဉ်:
1. သစ်တစ်ခု Minecraft အသားအရေ Create
- ပုံမှန်အသားအရေပုံ (Steve အဲလက်စ်, Blank အသားအရေ)
- ကက်တလောက်ထဲကနေအရေခွံ Browse
ဤသူအစွမ်းထက် tools တွေကိုနှင့်အတူသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့် fit 2. Edit ကို Minecraft အရေခွံ
- Bucket (tool ကိုဖြည့်ပါ)
- အရောင် palette
- မျက်လုံး dropper
- Moving tools တွေကို
- မှန်ဘီလူးအတွက် / ထွက် tools တွေကို
- button ကိုမလုပ်တော့ပါ
- ကို 3D ဟက် feature ကို
3.6လမျးညှနျ၌သင်တို့၏အကျင့်စရိုက်အလှည့်
4. သင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုမြင်နိုင် Adjust ။ editing Minecraft အရေခွံကိုဤလွယ်ကူသောကတည်းကတစ်ခါမှမ။
4 ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာ 5. ပို့ကုန်အရေခွံ
- Minecraft Pocket Edition ကိုကိုတိုက်ရိုက်တင်ပို့မှု
- BlockLauncher မှပို့ကုန်
Twitter ကို @keeratipong ပေါ်မှာငါ့ကိုလိုက်နာပါ။ https://twitter.com/keeratipong
Minecraft များအတွက်အသားအရေ Editor ကို Mojang အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးသည်မဟုတ်။ Minecraft Mojang AB ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော် Mojang AB နှင့်အတူတွဲဖက်ကြသည်မဟုတ်သတိပြုပါဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ https://www.minecraft.net/terms မှာ Mojang AB ထွက်သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များကိုလိုက်နာ ကျေးဇူးပြု.
Skin Editor for Minecraft အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Skin Editor for Minecraft အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Skin Editor for Minecraft အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Skin Editor for Minecraft အား အခ်က္ျပပါ
boyzinhos စတိုး 1 779
Skin Editor for Minecraft ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Skin Editor for Minecraft အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://remoro-studios.com/privacy_policy
လက်မှတ် SHA1: 52:8D:24:45:CC:9A:95:B3:BE:6B:F6:C7:7E:B6:39:BD:A0:D1:1E:C5
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Keeratipong Ukachoke
အဖွဲ့အစည်း (O): Keera
နယ်မြေ (L): Nonthaburi
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Nonthaburi
Skin Editor for Minecraft APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ